Ady amin’ny herisetra - Mbola maro ny Malagasy mihevitra ny lehilahy ho ambony noho ny vehivavy
Ady amin’ny herisetra – Mbola maro ny Malagasy mihevitra ny lehilahy ho ambony noho ny vehivavy
Publié novembre 26, 2018 par Book News
Hevi-draikitra eo amin’ny fiarahamonina Malagasy ny fiheverana ny lehilahy ho ambony noho ny vehivavy.
Lehilahy ambony noho ny vehivavy
Ny fiarahamonina Malagasy dia nametraka fa ny lehilahy dia manana fahefana ambony raha mitaha amin’ny vehivavy. Hita taratra izany eo fiainana an-davanandro. Raha jerena ny eo anivon’ny tokantrano dia misy ny fizarana andraikitra eo amin’ny roa tonta. Ny lehilahy dia heverina ho mpampidi-bola, ny vehivavy kosa dia natao hikarakara tokantrano. Raha eo amin’ny sehatry ny asa kosa, ny lehilahy no mitazona ny andraikitra sy toerana ambony nohon’ny vehivavy.
Mbola heverina ho ambany mihoatra noho ny lehilahy foana ny vehivavy.
Antony maro no mahatonga ny tsy fitoviana, toy ny fivoizana ireo hevi-draikitra maneho ny fahambonian’ny lehilahy sy fahambanian’ny vehivavy eo amin’ny fiarahamonina. Vokatra izay dia iharan’ny herisetra na ara-batana na ara-moraly ny vehivavy matetika.
Noho izany, misy ny fanentanana momban’ny fahefana amin’ny maha lehilahy nomen’ny Ecpat France hoan’ireo tovolahy teny Andoharanofotsy. Fanentanana nampafantarana ny momban’ny fahefana ananan’ny lehilahy sy ny tokony hampiasana izany. Tanjona ny hanovana ny toetsain’ny fiarahamonina sy hanova ireo hevi-draikitra izay mametraka ny lehilahy ho ambony nohon’ny vehivavy.
« Zava-dehibe ny fahafantarana ny fahefana ananan’ny lehilahy mba hanovana ny toe-tsaina », hoy Kévin, tovolahy nahazo fanentanana tamin’ny Ecpat France. Nilaza izy fa « vonona hanova ireo hevi-draikitra, hanome andraikitra ny vadiny rehefa manambady satria azon’ny vehivavy atao ny mitazona andraikitra toa ny lehilahy.